Induction Kutya aluminium ne Induction kutengesa zvinhu
musha / Applications / Induction Heating / induction kupisa aluminium
induction heat aluminium
Category: Induction Heating Tags: aluminium induction hita, aluminium induction kupisa, high frequency heating aluminium, induction aluminium kupisa, induction aluminium kupisa maitiro, induction heat aluminium, induction kupisa aluminium system, induction heat aluminium
Induction kudziyisa aruminiyamu susceptor yekuwedzera upfu ine yakakwira frequency kupisa system
Chinangwa Ita kuti upfu huve hwakasimba hunoshandiswa mumashandisi ekuputika
Chinyorwa Microspheric powder Aluminium kamuri 110mm (4.3 mukati.) Dhayamita x 35mm (1.3 mukati.) Yakadzika inoshandiswa kubata poda
Kupisa 150 ºC (302 ºF)
Kakawanda 20 kHz
Process Time 120 seconds
Zvishandiso • DW-MF-25kW kupisa induction sisitimu, yakagadzirirwa musoro webasa uri kure une (4) 2.6 μF capacitors (yehuwandu hwe2.6 μF).
• Makoiri maviri epancake 110mm (4.3 mu) dia. iine 45mm (1.8 mukati.) gaka, mune yekumusoro gadziriso yakagadzirirwa uye kugadzirirwa zvakanakira ichi chishandiso.
Maitiro Pazasi peiyo susceptor kamuri inosaswa neyekuburitsa mumiririri uye microspheric poda inowedzerwa mukamuri. Iyo kamuri inodziyirwa kwemasekondi zana nemakumi maviri kuti isvike 120º C (150º F) ichichinja
iyo upfu muchimiro chakasimba. Inobva yabvumidzwa kufefetera kusvika pa70º C (158º F) uye ichibviswa mukamuri.
Mhinduro / Makomborero Kuchengeta kupisa:
• kunoderedza nguva yekufamba kwenguva yekuwedzera kukohwa
• magetsi - anongodziisa iyo chikamu ichibvumidza kugadzirwa kudiki kunomhanya
• inonyatsoshandiswa kubvumira kushandiswa kwemhando dzakasiyana siyana kushandiswa
Induction Kuchenesa titanium uye simbi isina tsvina yemusoro unopisa